August 8, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 26
HARGEYSA(P-TIMES)- Xukuumadda Somaliland ee gadh wadeenka uu yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegtay in ay heshiis kala saxiixdeen Somaliland iyo dowladda Shiinaha, kaas oo la xidhiidha dhinacyada ganacsiga, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka geeska.
Heshiiska dhex maray labada dhinac ayaa yimid kadib markii Shiinuhu uu Somaliland u soo diray Wakiilka Shiinaha ee Afrika iyo Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha, waxaana kulan ka dhacay madaxtooyada Somaliland lagu daah qaaday heshiis rasmi ah oo dhex maray labada dhinac.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland oo kulankaasi faah faahin ka bixiyey ayaa sheegay in Somaliland iyo Shiinaha ay kawada hadleen arimaha labada dhinac isla markaasna waftigii soo booqday Somaliland ay kala xaajoodeen sidii iskaashi cusub ay u wada samayn lahaayeen.
Wasiirka ayaa sheegay in ujeedka xubnaha ka socday Shiinaha ay soo dhoweeyeen maadaama ay leeyahay Somaliland siyaasada fur furan waa sida uu hadalka u dhigaye.
Aduunka oo dhan ayuu sheegay Wasiir Liibaan Yaasiin in ay si wada siman ula wada macaamili doonaan iyaga oo aanan cidnaba ku xad gubnayn.
Qodobada laga wada hadlay ayuu sheegay in ay kamid yihiin isku socodka labada dhinac, horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga halka uu xusay wasiirku in dalka Shiinuhu uu kawado Qaarada Afrika horumar badan taas badalkeedna ay Somaliland soo dhowaynayso.
Booqashada Hargeysa ee waftiga Shiinaha ayaa ka dambaysay xidhiidh diblumaasiyadeed oo dhex maray Somaliland iyo Taiwan, kaas oo Shiinuhu uusan jeclaysan halka dowladda Soomaaliya aysan weli ka hadlin arimaha haatan socda.
Meeyeen kuwii sida indho ka’aanta ah Somaliland wax uga sheegi jirey? Dhuumasho mooyaane wax kale wallee uma banaana waa hadii ay damiir leeyihiine. Warkani in badan oo ka mid ah ayuu calool xanuun ku ridi doonaa.
Waxay socotaba hada heestii hoos maloo dhigay
Waxaynu ognahay in SOMALILAND ay tahay dal madaxbanaan macaamilaadna la samaystay qaybo ka mida dalalka aduunka taasina waxay ku timi aqoondheerida dadka reer SOMALILAND
Dawladnimada la sheegaa waa madaxbanaani iyo maafish. Wax u dhexaaya ma jiraan. Dawladaha aduunku waxey isku qaderiyaan Dawladaasi maka madax banaan tahay faro gelin dibadeed mise waa loo yeedhin karaa?
Shiinuhu wuxuu arkey in Xaarmaajo uu heysto waraaqo Keli ah. Safiirkooda ayaa cararey oo u tegey. Meeshaas madax rux uunbaa ka dhacey. Madaxbanaanida Dalnimo ee Somalia iyo ta Shiinuhuba waa muqadas ayay ku celceliyeen. Dabadeedna halkaas waxa uga cadaatey Shiinihii iney Suudh Madhan la hadlayaan. Dabadeedna Hargeysa ayuu si bilaa indho ah ugusoo cararey. Wasiir Ku Xigeenka Wasaarada Arimaha Dibada ee la holin waayay ayaa gambadh yar meel kadinka xafiiskiisa u dhow u dhigtey oo ku yidhi Safiirkaas, Afkaad Xaarmaajo kula sheekeysaneysay Madaxweynahayaga ula tegi meyside ee kala wareeg oo isaga noo soo dir. Sadex maalmood kolkuu joogey meesha ee uu ku jactadey ayuu qeylo dhaan dirtey. Weftigii cuslaa ee yimidna runta loo sheeg oo lagu yidhi waar soo dhawaada hadaad dooneysaan inaad cilaaqaad nala yeelataan, iska taga’se hadaan wax u yeedhis u timaadeen.
Abigii dardarta iyo baalo xoofteynta lasoo geleyna la dareensii inaanu waxba anaga noo yeedhin Karin. Waakaas ku khasbanaadey inuu Qunsuliyadii ay Hargeysa ku lahaayeen dalacsiiyo.
Soomaalida been wey sheegtaa, beense kuma maahmaahdo. Horaa loo yidhi Awood aanad Lahey haku faanin. Aabahay ayaa Diyaarad lahaanjirey anaa baaskiil leh ayaa dhaanta. Futo aanad laheyn laguma xaaro kkkk. Farmaajo Waraaqo madhan ayuu aduunka la hor boodayaa. Xaqiiqaduse waxa weeye sidaa Shiinaha oo kale ku dhacdey sidii wadamadii ka horeeyay. Kolkey arkeen inuu warqado xunxun lulayo ayay iskaga tageen oo bartey boogtoodu khuseysay abaareen. Bartiina waxaaney fileyn iyo Dawlad Gaamurtey oo si dhab ah ula dhaqantay ayay kala kulmeen. Maantaba waakuwaas ku khasbanaadey iney xidhiidh nala sameystaan iyagoo og in Qunsuliyad ay Taiwan leedahay Hargeysa ku taalo.
Soomaaliya Dawlada soo socota ee ay yeelan doonto iyo dhaqanada ay lasoo bixi doonto Allaahu Aclam, ka hordhici maayno oo si niyadsan ayaanu usoo dhaweyn doonaa illaa iyo aanu ka arkeyno in ay noqoto mid ficiladeedu noo cuntamaan iyo in kale. Laakiinse inta Xaarmaajo iyo wax la caqliyad ahi meesha joogaan Soomaaliya ha’idin deyso. Dib udhac iyo qiimo dhac mooyaane mustaqbal dhow iyo mid fogiba idinka dheer.
Adeer dee maxaa ka galay, dawladda Somalia arrimaha ka socda Somaliland, ma waxaad doonaysa sidii Carabta iyo Yuhuudda inay maalinba baaq cambaarayn ah soo waaraan, oo nacaska Maareeye uu isla soo taago hadal madhan meelahaa, dunidii runta ayey ogaatay, Somaliland wey tagtay duniduna waa aragtaa. Waana guul usoo hoyatay 5 ta Somaliyeed, adeer dalku waa dalkiinii Somaliyeey, maamulka uun baynu la kala baxnay, guulwade, hangash, NSS, iyo eydii daba-socotay, Bandoo, ma Maqli karno, Nin ka ay taasi maanta haysato ayey hawli ku hadhay, meesha Abgaal Xamar ka dhex qaylinayaan, ma Reer Woqooyi baa cisi ka helaya, while there is a will there is a way, we will never look back and make the same mistake twice, those people who forget their pass history are doomed to repeat it again. Somali ha noolaato, kaalaya nala, cuna, caba, jooga, wallee se inaan nin aan doonayn albaabka soo garaacayn, Alhamdullilaahi, Illaahii nagu Ilhaamiyey guusha baa mahad leh, Farmaajo iyo noociisu haku xukumeen oo madaxweyne ugu yeedh, wallaahi waxa dhaanta in sunta waraabaha la cabo.
Warkani qaabka loo dhigay waa midka waaxda saxaafadda looga yaqaanno “Click Bait” oo ah wararka iyo cinwaannadooda beenta ah ee se si xariifsan loo yar naashnaashay si ay caamadu biyo la’aan u laqdo. Xaqiiqada dhabta ahi waa tan.
Dalka Shiinuhu asal ahaantiisa ayuu u yahay waddan jirri ah (rogue state) oo xadaaradda iyo ilbaxnimada dunida kala haga aad uga baxsan. Shiinuhu iyaga oo jirri ahaa ayay haddana reer Galbeedku sii xumeeyeen oo waayahan waa xayraan dibi sidiisa is ka faaganaya. Fal iyo ficil kasta ee ay adduunweynaha kale kula cilaaqtami karaan ayay ku kacayaan. Waxaa xiga in maamul fallaageedka SNM isaguna yahay jirri Hargeysa go’doon ku ah (rogue militia). Jirridu sida caadiga ah iyaga ayaa is ku maan iyo dabeecad ah oo way isa soo jiitaan. Taasu waa mid.
Waxaa heshiisyo heer caalami ah u kala saxiixda labo waddan iyo ka badan oo rasmi u jira. “Somaliland” miyay rasmi u jirtaa baa wax walba ka horreysa oo jawaabtu waa maya. Maamul fallaageedka SNM ma kol buu isla hayaa dal iyo waxsoosaar iyo kheyraad dabiici ah ee uu dunida wax kaga ganacsan karo? Taasuna waa maya. Haddaba, igu-sawirkaas Hargeysa ka dhacay wax macna ah uu ku fadhiyo ma jiro. Haddii wax la kala saxiixdayna waa uun kaalmo aadminimo ee ay Shiinuhu ku deeqayaan ee marna ma noqon karto wax isweydaarsi rasmi ah salka ku haya. Maxay Hargeysa Shiinaha ka gadi kartaa oo ay shiinuhu uga baahan karaan? Waa waxba!
Qodobka ugu muhiimsan ee warkan burinaya waa kan: Shiinuhu jirri kasta oo uu yahay in uu caalamka oo dhan is ku sallido oo uu waddamo kale toos ugu xadgudbo dani ugu ma jirto. Fallaagada SNM ee Hargeysa fadhiidka ku ahi inta ay isleeyhiin ku kaca falal qarankooda Soomaaliya lagu xumeynayo ayay Beesha Caalamka ee naasnuujisa is ku sii dirayaan oo godka ku sii dheereysanayaan. In ay Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, iyo waddamda reer Galbeedka is ku soo jeediyaan wallaahi baanay dani uugu jirin. Si xun ayayna uga shallaayi doonaan.
Boodhariyo, Orodoo shiinaha la muran . wax kale kuuma harin.
Waxa cad xidhiid kasta oo SOMALILAYN gasho waa laga duwayaa u jeedadiisa, sida kii gini,masar iyo kan Taiwan waa TUULO ATTENTION RAADINASO, Shiinaha labo week ka hor wuxuu saxeexay waa lama taabtaan midnimada china iyo Somalia, taas xataa laguma soo qaadin HARGAISA, nin kuu aqoonsan gobol Somalia ah heshiis baanu la galnay HAYEE, II WAD SHEEKADA..
Sababta aan hubo in ay ku hoos xardhantahay imaatinka wakiilka Shiinaha ee Hargeysa waa in uu fallaagada Hargeysa u siday dhambaal canaan iyo digniin kulul xambaarsan oo salka ku haya socdaalkii wakiilkii Taiwan ee Hargeysa. Taas ayaan anigu hubaa.
Sideeda ba, qawsaarrada jabhadda SNM way ku dheereeyaan shaxda adag ee waddamada adduunka wax kaga furanayaan iyaga oo marba mid isku sawiraya si ay qaar kale uga hinaasaan oo sidaas laaluush iyo deeqo kale lagu aamuusiiyo. “Somaliland” awalba mashruuc lagu qaraabanayo ayuu ahaa ee ay soo hindisteen qawleysatadii Dowladdii Kacaanka ka soo hadhay oo ay dhuuntu dalooshay.
Shiinaha waxaad ku tiraahdaa war heedhe maxaad Somaliland ula hadasheen , waxay kuugu jawaabayaan markaa , juu jaa shii shuu xi xu , micnaheedu tahay dantayda halkaan ka aragno cidna wax kama waydiino , angaa naqaan .. iska soco adigu.
Qoraalkan dheer ee aad soo qortay wax xikmad & dhadhan ah ma laha. waa sida naag masyrsan sheekadeeda oo kale waa yaq yaqsi.
WAA ILAMEERAYSADII BEESHA WAALATA Ee Ethiopia iyo Masar, Shiinaha iyoo Taiwan, USA iyo Russia….Dad wareersan warkood baa halkaa ka muuqad kuna dambayn doonta “Maaweelada Carruuurta. Iyo Qabiilkayagaa Qaramada Midoobay Qaran U Aqoonsanaysaa”…Ila Meerayso..
hadee suldan@boodhari wax jiruu ka hadlee kuwaan qoraalkiisa fahmi waayey ayakaan wali gaarin heerka aqoonta uu suldanku wax ka fiirinaayo oo kusoo qoraayo kkkkk kkkkk. war anakaa wax aragney. waa kuwii markeey miraha geedka saaran gaari wayeen yiri uf markii horeba ma macaaneynee naga daaya kkkkk. mubarik sxb adaa naag sideeda wax u caayayee maa ka deysid kkkkk. war maseerka dhaafa oo ninka wuxuu idin dheer yahay ugu duceeya.
kkkkkkkkkkkkk! War Caaqilkoow Ilaahay garaadkaaga ha kuu barakeeyo oo caqligaaga saliimka ah ha kuu dhowro. Kuwan xasadkoodu waxba noo ma dhimi doono ee Eebbaheen iyaga xaqa ha garansiiyo. Rabbanaa Yacizak caaqil.
Sxb waxba ha isku wareerin kuwan. Sidaan wedkeyga u hubo ayaan u hubaa in xitaa hadii beritoole UNka lagaga dhawaaqo aqoonsiga Somaliland in xaasidiintan Somaliland iyo Isaaq neceybku dhaansadey (sidii Somaliland Isaaq uun tahay), ay i’iinyo iyo waa been iyo lama aqoonsan lasoo istaagi doonaan.
Boodhari oo kale wuxuu ku andacoon doonaa in Ay Somaliland ku heshey aqoonsiga iyada oo wuxuu Qawsaaro ugu yeedho oo ah Madaxdeena aynu inagu dooraney kkkk ay si farshaxanimo iyo khaa’inimo dheertahay ay uga soo xadeen aqoonsiga UNta. Indho sarcaad oo kale. Kkkk Iyo Sheydaanka ayay heshiis la galeen oo nafahooda ayay ka iibsheen. Kkkkk Kolka taas UNku ku indho bidhiiqsato kkk oo ay soo hambabortona ay kala laaban doonto aqoonsiga. Kkkkk Suga (his favorite word) idinku idinkaa arki doona aqoonsigaas oo lagala noqdaye. Suga, Suga, Suga…. Kkkkk
Sxb nin neceb sinaantaada
Adna buri sareyntiisa
Waa lagu digtaa ruux haduu kuu darnaan jiraye
Soomaalinimadu waa qaali. Laakiinse eeg kuwan nagu salidan ee talaabadaanu hore u qaadnaba ay meel baas damqeyso. Wanaageena neceb, jabkeenana ku diirsada. Hadii war xun Somaliland kasoo yeedho mashxarad bey la oogsadaan oo alalaaskooda meeshaba wuu qarqiyaa.
Kuwaas oo kale looma beer jileecee waa lagu wiirsadaa. Anigu si xun ugu tiiqtiiqso ku odhan maayo ee waxaan ku leeyahay uun ku qarqi guul walba oo aynu gaadhno. Xitaa hadaanu webkan ku oolin soo hadal qaad ama link ba soo dhig. Intaasaa gubniin ugu filan.
Adna dembi galabsan meysid oo waxaad baahisay war wanaagsan oo Somaliland khuseeya, iyaguna kaasey ka guban doonaan oo ka xumaan doonaan. Labada goorba xumaantu iyagay la deris tahay. Adna ku qosol oo ka maadeyso.
Maalintey garwaaqsadaan Somaliland iyo wanaageeda iyo walaaltinimada Soomaaliyeed ayaynu inaguna ka debcin doonaa.
UhA. A. Xade says:
Ummadda Soomaaliyeed waxaa u dan ah, in Iidoor la aqoonsado oo uu ka dhex baxo dadka Soomaaliyeed ee Bariga Africa ku dhaqan!
1964tii ayaay Itoobiya weerar ku soo qaaday, Soomaaliya oo 4 sano jir ahayd.
Waxaa cajiib ahayd, in aay ogaatay Dowladdii Aadan Cadde ee markaa jirtay, in uu Wasiirkeedii Arrimaha Dibaada oo IIDOOR ahaa uu Itoobiya u JAAJUUSAYEY!!!
Kaas oo la xiray, aayna mar dambe sii daaysey, Dowladdii Kacaanka!!
Marka, Iidoor wax dhinka uu ummadda Soomaaliyeed u leeyahay ayaa ka badan faa’iidada aay leedahay kamid ahaanshihiisu!
Iidoor intii aad Soomaalinimo u soo dhaweeysan lahayd, Amxaar Afrikaannimo u soo dhaweeyso!
Ugaas UhA. A. Xade,
Sacaadatul Ugaas, haddii ay iidoorku leeyihiin geyi dhan oo iyaga u go’an ee ay ku keli yihiin aniga ayaa ugu horreyn lahaa cid waddan gaar ah u aqoonsata oo uguna duceysa runtii. Iminka se waa dad Soomaalida kale ku dhex nool oo mandiqadda la wadaaga. Sida loo jeedo na marka doodaha rasmiga ah laga badiyo ayaa waxay u dhurtaan “Isaaq baa la necebyahay” iyo ciic iyo caac aan sal iyo raad toona lahayn. Kuwan halkan ka dinaaha waa kuwa aan weli ka la’ahay in ay noo soo bandhigaan sababta macquulsan ee siyaasadda iyo diblumaasiyadda caalamka waafaqsan ee kallifaysa in uu Woqooyi Galbeed Soomaaliya ka go’o iyo sababta aanay dhammaan beelaha kale dareenkaas u la wadaagin. Bal carr ha inoo sheegeen waa kuwan ee.
Middeeda kale, waa duulka iyaga oo u jeeda in uu dalka Shiinuhu naf iyo maal ba dul dhigayo sidii uu qowmiyadda Shiinayska ah hal calan u wada hoos keeni lahaa – sida Taiwan, Hong Kong iyo waxii soo raaca – ee haddana u ololeynaya in ay ummadda Soomaaliyeed kala qoqobanto oo waddamo yaryar u sii kala qaybsanto. Iyagii ayaa haddana isla sii qumman oo Soomaalida kale ee midnimada Soomaaliyeed u halgamaysa sideenna wax ka sii sheegaya. Haddii uu Shiinuhu dadkiisa soo xereysanayo maxaa iyaga garaadkaas iyo garashadaas ka dhoohay?
Cismaan Boodheri muxuu qorey ee la garan waayay?
Wuxuu qorey wey iska soo horjeedaan.
Wuxuu ku bilaabey warkani waa ‘click bait’. Warku wuxuu kasoo unkamay VOA. Isagoo maqal ahna wey soo dhigeen puntlandtimes. Qoraalka iyo maqalkuba wey is waafaqsan yihiin. That is first fail. Halkaas wuu ku dhacey. Yaa Damiin.
Wuxuu kaloo yidhi Shiinaha iyo Falaagada SNMba waa Jirri. Jirrina Jirrigiisa ayuu la boodaa. Sababtaas ayuu Shiinuhu ugu tegay Somaliland. Kkkk Intaas wuxuu marmansiinyona uga dhig is lahaa sababta ay caadi u tahay in Shiinuhu uu Xaarmaajo ka boodo toosna u abaarto Somaliland.
Waxa kale oo inta bujuubajaa ee kale kolka laga yimaado ugu mudnaa wuxuu yidhi labadan qodob.
Somaliland heshiis lama saxeexan karto wadan jira waayo waa wax jira ma ahan iyo Cilaaqaadka ay Somaliland la yeelatay Shiinaha waxa uu caqabad ku noqonayaa isla iyada waayo Reer Galbeedka sida EUda iyo Mareykanka ayaa ka xanaaqi doona. Kkkkk
Labadaasna wey is burinayaan. Horta cilaaqaad ma yeelan karto iyo hadey yeelato meelba mawada galaan. Another fail.
Tan EU iyo Maraykanka ayaa qoonsanayana ma garan karo meel ay ka timid. Macno ay ku fadhidaaba ma Jiro.
Ugu horeyn Somaliland Shiinaha runta ayay u sheegtay. Waxey tidhi soo dhawow hadaad rabto inaad cilaaqaad nala yeelato. Taiwan hadey kaa mid tahay adiga ayay kuu taalaa sidaad usoo xero gashan laheyd. Anaga nama khuseyso. Taiwan dantayada ayaan ka aragney ulana heshiiney. Beri ka maalin hadaad isku biirtaan ama ay idinka mid noqoto anagu waanu qadarineynaa. Shiinuhu iyagoo og in Qunsuliyad Taiwan leedahay Hargeysa ku taalo ayuu heshiiskaas nala galay. Mida kale Mareykanku wuxuu ansixiyay Xeer mucdiisu tahay inuu wax tarayo cidii Taiwan xidhiidh la sameysata ama xidhiidhka sii wanaajisa. Euduna hoosta ayay kala qabtaa mowqifkaas. Passportka Taiwan waxa lagu tegi karaa Euda oo dhan oo aqoonsan. Kolkaas Somaliland oonan xidhiidhka u Karin Taiwan hadey Shiinaha cilaaqaad labyeelato waxba u dhimimeyso cidina qoonsan meyso. Waayo iyaguna cilaaqaad Shiinaha wey la leeyihiin. Waxayse la mabsuudsan yihiin sida ay Somaliland Quwadaas weyn ee Shiinaha ugu babac dhigtey si wanaagsana iskaga moostey hanjabaadeheedii iyo baalo xooftadeedii. Another fail. Halkaasna wuu ku dhacey.
Sxb intaas wax ka baxsan eed aragtey adaan kaaga fadhinaa inaad noo macneyso.
somalilaan baa china u baabac dhigtey kulahaa kkkkk kkkkk kkkkk. idoor wixiisu faan waa dhaafey hadda kkkkk. bal noo wad sheeko xariirta duqa.
su’aalaha suldanku wali idin ka sugaayo amaa ka jawaabtaa sxb intaa waxaan kale ka baxdid? waa kuwaanee mar kale akhri ((in ay noo soo bandhigaan sababta macquulsan ee siyaasadda iyo diblumaasiyadda caalamka waafaqsan ee kallifaysa in uu Woqooyi Galbeed Soomaaliya ka go’o iyo sababta aanay dhammaan beelaha kale dareenkaas u la wadaagin. Bal carr ha inoo sheegeen waa kuwan ee.))
Jawaabta waa lagaa sugaayaa hala daahin sxb. maxaa kalifey inaa goosataan haddaa idoor tihidiin? kasoo jawaab.
Waad ku dhacdey inaad noo qeexdo waxaanu fahmi weyney. Xitaa hadaadan heynin inaad qirato ayay aheyd ood gacmaha sare u taagto. Kkkkkk Fail.
Horta adigu ma shaaqiyad ayaa tahay? Maad fikradaada dhiibatid intaad qof kula mid u jiibineyso?
Tan kale kun magaclaha Boodhari Sheegta imika ee aad ka dabo sacabineyso, Shan Sano ku dhawaad ayaa isagoo Warsangeli Sheegta doodii kasoo dhameyney. Somaliland si wanaagsan ayuu u magac dhebi jirey. Waalaaleyaal yeynaan walaaladeen ka tegin ayuu odhan jirey. Marna Puntland nimo ayuu duulin jirey. Xitaa wuxuu gaadhey inuu yidhaa Somaliland iyo Puntland oo wada goosta ayaa la qaadan lahaa. Dha’da iyo Niin tana weynu ka tirtiri laheyn woxoogey dabadeed ayuu odhan jirey. Sababta uu sidaas u lahaana waxa ka buuxa neceyb iyo baqo waxaan kolkaas u kala garan waayay. Waayo Majeerteen wuxuu u arkayay quwad uu Isaaqa kula gorgortami karo. Waa sidaan anigu is idhiye. Wuxuu ka baqayaa hadii Somaliland sidaas lagu aqoonsado Warsangeli oo ka mid ah, in ay Ku khasbanaanayaan waxaanu liqsiino. Seexanayaana goortaanu seexda ku nidhaa. Kamaba dhaadhacsana inuu cadkiisa helayo dalkana aanay cidiba ka xigin oonu ogol nahay inay na xukumaan. Qabyaaladu waa Belo. Baquhuna kaba daran.
Wuxuu noo dhaafi waayay Daaroodism. Jiiro walbood ka laabato af qabiil waxaan ka aheyn ka weyney. Imikana halkan wuxuu kusoo galaa Majeerteen, Somaliland ma jirto ayuu lasoo taagan yahay. Waxaad odhan Somaliland isna Majirto ayaa kasoo fakan xitaa hadaanu inuu juuq yidhaahdo.
Hadalkii oo kooban, Somaliland Sababta ay u go’eyso halkan adiga iyo cid kale oonan Somaliland aaney dhegehooda ku dhici karin, afkoodana soo mari karin uga sheekeyn meyno. Bartiinaas dhegooleyaal ku metaala filinkaas. Jiliinka’se naga soo adkeeya.
MA’JIDHO kolkaad leedihiin si wanaagsan waad kaDHaane ugu dhawaaqa.
Ninkaagii dhammaa ee su’aalaha dahabiga ahaa lagu xujeeyay waxa aad doodda kaga galgalatay bal arag:
“Hadalkii oo kooban, Somaliland Sababta ay u go’eyso halkan adiga iyo cid kale oonan Somaliland aaney dhegehooda ku dhici karin, afkoodana soo mari karin uga sheekeyn meyno.”
Wax aad ku sheekeyso ayaad wayday dheh oo runta iska qiro maandhoow. Qiil iyo sabab caqligal ah ee aydun “Somaliland” ku saleysiisaan in aydaan hayn 30ka sanadood ee aydun weli la xakaaraysaan oo cid idiin ka hoos qaadda la waayay ayaa markhaati buuxda inoogu filan.
Aynu mar kale miyirka idiin toosinno ee qaraw maalmeedkan inta ka hambobartaan Soomaalidiina iyo Soomaalinimadiina iimaansada oo ku naallooda, wax idiin dhaamaa abid ma helaysaan ee. Wadajir bay labo gacmood wax ku qaban karaan ee aynu iswaheshanno walaalayaal.
Anagu dadka shakhsiyaddooda ma duqeyno sidaada ee doodaha ayaynu xaqiiqooyinka iyo waaqiciga dhabta ah ku daaddihinaa. Baabkan “jidhaa” na adiga ayaa inoo furay oo waa dood inoo socon doonta.
Anigu waan kaa shekiyay adiga, sabab , adigoo qadiyad aad aaminsan tahay ka hadla ama mawduuc socda ka hadlaya lama arag . mar walba waxaad meesha la soo gashaa adigoo nin kale amaanaya waa dhaqan aad u xun , naagaha ayaa ku haboon in ay raga amaanaan hadii aad side kale ee kaa muuqata , iska wado waxaaga xun ee xilka leh.
Naagaha & Makhaaniida ayaa raga amaana iska daa dhaqan xumida . hadaad sidaa u dhalatayna iska wado waxaa xun ee xilka leh.
Qof haddi uu san haysan driving Licence Gaari ma wadi karo, marka ,
Marka hore sharciga na waydiista si aad Aduunyada ugu drive gareysaan, haddi kale Dawlad Goboleedkaas ku sugnaada, ma ku xubunid,
ku socota Waqooyi Galbeed
Ma adigaa licence leh oo gaadhii wata ? adeer nafdaada been ha u sheegi, Baabuur Ugaandha & burundi wadato ayaad gadaal saraan tahay sida daanyeer yar.
Adiga iyo Saaxiibada ha habadinina Ciyaarta haddi kale waad dhumineysaan sidaad hadda tahay
Waa qayb ka tirsan Soomaaliya oo is- maamul hoose leh,oo oo ay hornuud ka yihiin taageerayaashii SNM oo ah dadka ee waqooyiga Soomaaliya.
Cidina dunida ictiraafimayso maamulka la baxay Soomaalabd .
Haddan mardhow ka danbow,markii albaab kasta ka soo xirnay oo dadkii waqooyiga Soomaaliya daganaa ay ku biireen Soomaaliya ay ku biiri iyana Soomaaliya.
Soomaaliya guul,wadjir iyo nabad.